ရန်ကုန်မြို့ကြီး ကို စိန်ခေါ် နေတဲ့ နိုင်ဂျီးရီးသားတွေ ရဲ့ မိုက်ရိုင်းပုံ – Let Pan Daily
ရန်ကုန်မြို့ကြီး ကို စိန်ခေါ် နေတဲ့ နိုင်ဂျီးရီးသားတွေ ရဲ့ မိုက်ရိုင်းပုံ
၁၅ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးတဦးကို နိုင်ဂျီးရီးယားလူမျိုး ငမဲကောင်ကအတင်းဆွဲချုပ်ပြီး အိနြေ္ဒပျက်ပြားအောင် လုပ်တယ် ။ဒေါ်တင်တင်မော်ရဲ့ သမီး ၁၀ တန်းကျောင်းသူကို နိုင်ဂျီးရီးယားငမဲက ရီးစားစကား လိုက်ပြောသတဲ့ ။အမေဖြစ်သူက တားမြစ်တော့ ဒေါ်တင်တင်မော် ပန်းကန်ဆေးတဲ့ နေရာအထိ လိုက်လာပြီး ငမဲကောင်က ရန်လုပ်သတဲ့ ။ဒေါ်ဆွေမွန်ရဲ့ တူမကို ငမဲကောင်က နှောင့်ယှက်သတဲ့ ။အဲလိုတွေ ဖြစ်နေလို့ရဲသွားတိုင်တယ်ဘာတခုမှ ထိရောက်တဲ့ ကူညီမှု မပေးဘူးတဲ့ ။ လဝက ကို လွှဲချတယ် ။ လဝက. ကလည်း passport ရှိလို့ ဘာမှ လုပ်မရဘူးတဲ့ ။
အဲလို ဖြစ်နေတာ နိုင်ဂျီးရီးယားမှာ မဟုတ်ဖူးနော် ။ မြန်မာပြည် ရန်ကုန်က မရမ်းကုန်း မြို့နယ်မုဒိတာ အိမ်ယာ (၁). မှာ ဖြစ်နေတာတွေ ။အဓိကတာဝန်ရှိတဲ့ ထွေအုပ်ဆီကို ၄ ကြိမ်သွားတိုင်တယ် ။ စည်ပင်ကို လွှဲချတယ် ။စည်ပင်ကို ၆ ကြိမ်ထက်မနည်း သွားတိုင်တယ် ထွေအုပ်ကို ပြန်လွှဲချတယ် ။အဲဒီ ရမ်းကား နေ တဲ့ နိုင်ဂျီးရီးယားတွေက မုဒိတာ အိမ်ယာမှာ အခန်း ၁၅ ခန်းလောက်ငှားနေကြတယ် ။ တခန်းကို ၅ ယောက်နှုံးလောက်နေကြသတဲ့ ။လဝက တခါလာစစ်ပြီးတိုင်း လူဦးရေ ထပ်တိုးလာသတဲ့ ။
ဘယ်သူမှ အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးခြင်း မရှိလို့ ၂၀၂၀ ပုံမှန် လွှတ်တော် အစည်းအဝေးမှာ တရားဝင်မေးတော့ မြို့တော်ဝန် မောင်မောင်စိုးက ရှေင်းပေးပါ့မယ်လို့ကတိပေးခဲ့ပြီး ဒီနေ့အထိဘာတခုမှ မလုပ်ပေးသေးဘူး ။ကတိကဝတ် စောင့်ကြည့်ရေး ကော်မတီသေနေပြီလား မသိဘူး ။အခြားနိုင်ငံခြားသားတွေဟာ form C ဖြည့်ဖို့ အတွက် ရပ်ကွက်ထဲမှာ နေထိုင်ကြောင်းထောက်ခံစာကို တပတ်တခါ ယူကြရပေမယ့်ဒီပြဿနာကောင် နိုင်ဂျီးရီးယားသားတွေ ကတော့ တခါမှ လာမယူဘူးတဲ့ ။လဝက. ဦးစီးမှူးကို ၂၀၂၀ မတ်လ ထဲမှာအဲဒီအကြောင်း သွားမေးတော့ နိုင်ဂျီရီးယား သံရုံးက တာဝန်ယူတယ် သူတို့စနစ်တကျ ကြီးကြပ်မယ်ပြောလို့မြန်မာအစိုးရရဲ့ လဝက ရုံးက ဘာမှ မလုပ်တာ ဆိုပြီး ပြောသွားတယ် ။ မြန်မာပြည်က နိုင်ဂျီးရီးယားရဲ့ ကျွန်နိုင်ငံလား ဗျ ။မုဒိတာ အိမ်ယာက လူတွေကတော့ဒါကို မတားဆီးဘူးလား ဆိုတော့ မုဒိတာအိမ်ယာမှာ အိမ်ယာ သာယာရေး နဲ့ ကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီကို ၂၀၁၉ မေလ. ကတည်းက လူရွေးချယ်ပြီး စာရင်းပေးထားကြောင်း မြို့တော်ဝန်ရဲ့ အတည်ပြုချက် မရသေးလို့ဘာမှ လုပ်မရသေးဘူးတဲ့ ။
ကဲ ဒီဖြစ်စဉ်ကို သုံးသပ်ကြည့်ပါ၁ ။ ထွေအုပ် ဘာလုပ်နေပါသလဲ ?ကြီးကြပ်ဖြေရှင်းပေးရမှာ ထွေအုပ်ရဲ့အဓိက တာဝန် မဟုတ်ဖူးလား ။ စည်ပင် ဘာလုပ်နေပါသလဲ ?လွှတ်တော်မှာ ဖြေရှင်းပေးပါ့မယ် ပြောခဲ့ပြီး ဘာမှ လုပ်မပေးတာ မောင်မောင်စိုးရဲ့ သမီးတွေမြေးတွေ အစော်ကား မခံရသေးလို့လား ?၃ ။ ရဲတွေ ဘာလုပ်နေ ပါသလဲ ?န်ြမာချင်းဆို လူမှုရေး မရှိ တာဝန်အရပါဆိုပြီး လက်ရဲဇတ်ရဲ ရှိခဲ့လေသမျှ နိုင်ငံခြားသားဆို ဖင်ခံချင်စိတ်ပေါက်နေတာလား ?၄ ။ လဝက ကတော့ အံ့ဩစရာ အကောင်းဆုံးပဲ ။စ်ြနိုင်တာကတော့ လဝက လာဘ်စားထားလို့ဒီပြဿနာ ကြီးထွားလာရတာပဲ ။
နိုင်ဂျီးရီးယားတွေ ဘာလာလုပ်တာလဲ ?ောလုံးသမားတွေလား ? ဦးဇော်ဇော် နဲ့ ပါတ်သက်နေလို့ လာဘ်စားပြီး မဆီမဆိုင် သံရုံးလွှဲချနေတာ ရှက်စရာပါပဲ ။သံရုံးတွေက တာဝန်ယူပါတယ် ဆိုတိုင်းလွှတ်ပေးထားရအောင် မြန်မာပြည်က မင်းတို့အမေ့လင် တိုင်းတပါးပိုင်မို့လို့လား ?ပြဿနာသေးတုန်း မဖြေရှင်းကြဘူး ။ အပြန်အလှန် ဘောလီဘောပုတ် စောက်ကျင့်ယုတ်နေကြတဲ့ ထွေအုပ် ၊ စည်ပင် ၊ရဲ ၊ လဝက အစရှိတဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေကိုအရေးယူပေးဖို့သမ္မတ မှာ တာဝန်ရှိပါတယ် ။ဘာတခုမှ အလုပ် မလုပ်ပဲ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာထဲကနေ လစာယူနေတာ မရှက်ဘူးလား မေးချင်ပါတယ် ။
ကဲ နိုင်ဂျီးရီးယားသားတွေ အတင့်ရဲလာပြီမြန်မာ မိန်းကလေးကို မုဒိန်းကျင့် လာတဲ့ အထိကျူးလွန်လာမယ် ။ ပြည်သူလူထုက သည်းမခံပဲ အဓိကရုဏ်း ဖြစ်လာမယ် ဆိုရင် ခင်ဗျားတို့ အစိုးရ ဘာလုပ်မလဲ ။အင်ပြည့်အားပြည့်နဲ့ ပြည်သူကို ဟန့်တားမယ် ။ဥပဒေဆိုတဲ့ စကားကို မတန်မရာ ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ပြောပြကြမယ် ၊၊ကိုယ့်ပြည်သူကို ရက်ရက် စက်စက် ပစ်ခတ်နှိမ်နင်းမယ်(ရခိုင်မှာ သေခဲ့ရတဲ့အရေးအခင်း ပြန်ကြည့်အာဏာနဲ့ ပါတ်သပ်ရင် ဒေါ်စုလည်း လူသတ်တာပဲ) ။အဲလို အဆင့်မရောက်အောင် အခုလို အချိန်ကတည်းက ထိထိရောက်ရောက် တာဝန်ခံမှု တာဝန်ယူမှု အပြည့်နဲ့ လုပ်ပေးသင့်ပြီ …